बलिउडका बादशाह शाहारुख खान कु’टि’ए, कारण यस्तो रहेछ – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/बलिउडका बादशाह शाहारुख खान कु’टि’ए, कारण यस्तो रहेछ
बलिउडका बादशाह शाहारुख खान कु’टि’ए, कारण यस्तो रहेछ
एजेन्सी । बलिउडका बादशाह शाहरुख खान कु’टि’एका छन् । उनलाई दिल्लीका केटाहरुले कु’टे’का हुन् । खान एउटी युवतीलाई आफ्नी प्रेमिका भनेकोमा दिल्लीका केटाहरुले उनलाई कु’टे’का थिए । यो कुरा शाहारुख आफैले बताएका छन् ।
शाहरुख खानले कपिल शर्माको च्याट शोमा यसबारे जानकारी दिएका छन् । उनले भनेका थिए, ‘एकपटक म एक युवतीलाई डेट गरिरहेको थिएँ, त्यति नै बेला ती युवतीलाई आफ्नी प्रेमिका भन्दा केही केटाहरुले मलाई कु’टे’का थिए । केटाहरुले ती युवती मेरी प्रेमिका नभई मेरी भाउजु भएको बताउँदै मलाई कु’टे’का थिए ।’
शाहरुख खानले घटनाबारे कुरा गर्दै उनी आज पनि आफ्नी श्रीमतीसँग दिल्ली जाँदा उनलाई भाउजु भन्ने गरेको बताए । दिल्ली जाँदा कसैले गौरीबारे सोध्दा उनी उनको परिचय भाउजुको रुपमा दिन्छन् । यो कुरा सुनेर कपिलको सोमा हाँसोको फोहोरा गुञ्जिएको थियो ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके आजको दिनलाई सकारात्मक बनाउने समय छ । वित्तिय संस्थाबाट सहयोग मिल्नेछ । स्वादिष्ट भोजन पाईनेछ । – ज्यो.प. नारायणप्रसाद दुलाल
ॐ यस्तो ठाँउमा बाटो खन्दा फेला पर्‍यो यस्तो ऐतिहासिक मूर्ति…(भिडियो हेर्नुस)
टिकटकमा फलोअर्स् बढाउने चिन्ता छ? १० करोड फलोअर्स् भएकी यी १६ बर्षिया किशोरीबाट सिक्नुहोस् (भिडियो पनि छ)
म ३३ बर्षकी सिगंल हुँ,म एक्लै छु मलाई फोनमा बोल्ने, रमाइलो केटा साथी चाहीयो। भिडियो सहित